Ny Google Pixel maharitra 30 minitra rendrika tsy misy olana | Vaovao momba ny gadget
Ny Google Pixel vaovao dia manome antsika famaritana mahafinaritra amin'ny vidiny izay tsy ny antony lehibe indrindra ahazoana ireo terminal napetrak'i Google teny an-tsena. Fa ankoatry ny vidiny, ny iray hafa fa hitantsika amin'ity terminal ity dia ny resistor IP53, izay tsy mamela antsika hanitrika ilay fitaovana ao anaty rano, tsy mahavita afafy rano fotsiny izy. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny toeram-piantsonana avo lenta eny an-tsena, izay tian'i Google hametrahana ny lohany, dia manome antsika fanoherana ny rano, mba hahafahan'izy ireo milentika tsy misy olana. Amin'io lafiny io dia mivoaka ratsy ny Google Pixel ary iray amin'ireo antony mahatonga ny mpampiasa maro tsy manapa-kevitra ny hividy azy.
Amin'ity horonantsary ity dia andrana fitsapana telo hahitana ny fanoherana ny Google Pixel amin'ny rano. Voalohany, mandroboka kely ao anaty savony mandritra ny fotoana fohy izy, hahitana raha miditra amin'ny alàlan'ny fifandraisana rehetra ny rano. Faharoa, hafafiny amin'ny rano, manahafana ny orana, ary fahatelo ny Google Pixel dia alentika anaty rano mandritra ny 30 minitra Ary araka ny hitantsika dia afaka manohitra izy nefa tsy manome olana manaraka eo amin'ny asany, farafaharatsiny vantany vao vita ny fitsapana. Amin'ity horonantsary ity dia tsy hitantsika raha nisy fiantraikany tamin'ny fakantsary tamin'ity fitsapana farany ity.
Tsy afaka mahita ny fomba fiasan'ny efijery araka ny tokony ho izy isika. Tsy hainay koa raha sendra olana ny mampifandray ny USB-C rehefa mamaly azy io. Ny mazava dia amin'ny mety rehetra Google dia hanisy fanoherana ny rano amin'ny andiany manaraka Raha tena te-ho mpanolo ny mpanjaka any amin'ny havoana avo lenta ianao ankehitriny, izay tsy ahitanay an'i Samsung sy Apple fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny Google Pixel maharitra 30 minitra rendrika tsy misy olana
Ity teknika vaovao amin'ny fanontana graphene ity dia mety hampiroborobo ny elektronika amin'ny taratasy